Nezvedu | HEBEI XINTELI CO., LTD
Hebei Xinteli idiki bhizinesi rakasarudzika kupinza uye kutumira kunze, uye rakatorwa kubva pakuumbwa kwechinyakare makambani ehurumende anotengesa kunze kwenyika. . Izvo zvigadzirwa zvemhando yeHebei Xinteli ndeye tambo mesh (yakakomberedzwa waya pajira riya, welded waya pajira riya), simbi fence (munda fenzi, holland fenzi), gadheni zvigadzirwa, simbi zvigadzirwa uye zvemidziyo zvigadzirwa. inogona kupa akawanda akasiyana ekurapwa kwepamusoro.Akavezwa kwakakurudzira, PVC yakavezwa, kwakakurudzira nePV yakavharwa Zvinhu zvacho zvichatariswa zvakanyatsonaka usati wasununguka, kuitira kuti upe mhando yepamusoro yevatengi vedu.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mune zvekurima, kuchengetedzwa kwemhuka, mapindu nezvimwewo bhizinesi redu rinofukidzawo kupinza uye kutumira kunze kwenyika marudzi mazhinji ezvigadzirwa nemaitiro. Tiri kutsika kumusoro mutengesi mu Hebei Province yeMetal & Bindu zvigadzirwa.
Mumakore achangopfuura, Hebei Xinteli anga achitarisa pakutsvaga nekusimudzira zvigadzirwa zvitsva. Nenzira yekuvandudza mashandiro, chigadzirwa chedu chakagara chichiwedzerwa. Yedu yekutengesa network yakasimbiswawo zvakanyanya. Zvigadzirwa zvedu zvino zvinobudirira kutengeswa mumisika yepasirese kunyanya muEurope, United States of America, North America, Africa- Nezvimwewo Bhizinesi razvino raHebei Xinteli riri kukura nematanho akatsiga.
Hebei Xinteli ane rakanakisa timu revatambi vanobata, izere neshungu, hutano uye kugona. Tinotenda, pamwe vagari kuedza kwenhengo dzose, Hebei Xinteli zvechokwadi achava mureza zvebhizimisi muna Hebei wokumwe dzaishandiswa indasitiri.
Hebei Xinteli ane rakanakisa timu revatambi vanobata, izere neshungu, hutano uye kugona.